Fifampiresahana Tamin’i Gyani Maiya Sen, Iray Amin’ireo Mpandahateny Farany Mampiasa Ilay Fiteny An-dalam-pahaverezana ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2018 5:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, русский, Français, Español, 繁體中文, 日本語, বাংলা, नेपाली, English
Hatramin'ny ela, vitsy ny olona no nahalala ny fisian'ny kusunda, fiteny tandrefana iray sy ao afovoan'i Népal. Ny fanisambahoaka tamin'ny taona 2011, nataon'ny Birao Foiben'ny Antontanisa ao Népal, dia manombana ny mponin'i Kusundas,, foko iray ao amin'ny alan'i Népal andrefana, ho manodidina ny 273. Mba hahafantarana bebe kokoa momba ny teny sy ny kolontsain'ny foko Kusunda, nihaona tamin'i Gyani Maiya Sen Kusunda ny Global Voices – ilay iray tamin'ny roa monja mba mpandahateny tsy miambakavaka amin'ny fiteny kusunda, teny iray an-dalam-pahaverezana.
Mafana sady maina ny andro tamin'izay, tsy nisy olona teny an'arabe, ary na ireo mpitondra ny Tuk-Tuk [frantsay] mandeha amin'ny herinaratra aza tsy vonona ny hitatitra anay. Mavesatr'ireo tongo-telo (trépieds), fakantsary ary fitaovana hafa maro mba hakàna horontsary, nandeha nanatona an'i Gyani Maiya Sen tao an-tanànan'i Kulmor izahay, tanàna izay miorina ao amin'ny distrika nepaley ao Dang. Gyani Maiya Sen Kusunda, vao avy feno valopolo taona, dia iray tamin'ireo mpandahateny roa miresaka tsy miambakavaka ny teny Kusunda efa miala aina. Miisa 273 ny vahoaka Kusundas, kanefa na izany aza, ireo fanadihadiana teny an-kianja tao anatin'ireo distrika nepaley dia nahitana fa ny 150 amin'izy ireo monja no miparitaka ao Dang, Rolpa, Pyuthan, Arghakhanchi ary Surkhet.
Nipetraka tao anatin'ireo tanàna ry zaeo Kusundas taorian'ny niainan'ireo razambeny tany anaty ala mikitroka sy ireo lozoka, sahala amin'ireo foko mpifindrafindra fonenana. Tsy mankao an-tanàna izy ireo raha tsy hangataka fiantrana, ary maro ireo Kusundas no mbola miahotra hilaza izay anarany satria mbola heverina ho toy ireo “mponina anaty ala” foana ry zareo. Na izany aza, amin'izao fotoana izao, naka anarana Thakuri ry zreo, toy ny hoe Shahi, Sen ary Khan – anarana izay mifandraika amin'ny foko mpitarika ao Népal. Nanambara tena ho ban rajas, mpanjakan'ny ala ireo Kusundas.
Uday Raj Aaley, mpikaroka iray izay manokan-tena amin'ny fanomezana aina ny kusunda, mahay miteny an'io teny io ihany koa. Na izany aza, matahotra i Gyani Maiya fa i Rakshya, zafikeliny vavikely, dia tsy miteny mihitsy ny tenindreniny, araka izany tsy mandray anjara amin'ny fitazonana ho velona ny nentin-drazana. Rehefa tafahaona tamin'i Gyani Maiya izahay, sahirana nitetika manga maitso izy sy ilay zafikeliny. Nampianariny azy ny mamaofy izany, ny mandidy azy ary ny manahy azy mba ho ampiasaina atsy aoriana kely, saingy indrisy, mifampiresaka amin'ny teny nepaley izy ireo.